Xiaomi Mi 11: Falanqaynta, sifooyinka iyo tijaabada kamaradda | Androidsis
Xiaomi Mi 11: Falanqaynta, sifooyinka iyo tijaabada kamaradda
Shirkadda Aasiya waxay sii wadaa inay si adag u shaqeyso si ay u bixiso boosteejooyin dhammaan noocyada, wax uun Xiaomi kama joogsaneyso bilowgeeda joogtada ah ee inagu kalifaya inaan ku halaagno badweynahan terminal-ka. Munaasabadan, sida aad u jeeddo, waxaan diirada saari doonnaa uguyaraan uguna xiisaha badnaa sumcadii ugu dambeysay ee "dhamaadka-sare".
Waxaan miiska ku haynaa Xiaomi Mi 11 cusub, oo ah aalad "sare" ah oo u timaadda inay kula tartanto sida ugu fiican suuqa, ma u qalantaa? Nala soo baro waxa jira faa'iidooyinkiisa iyo dabcan waa maxay cilladaheeda si aad si sax ah uga fiirsan karto iibsigaaga.
3 Qeybta warbaahinta badan
4 Imtixaanka kamaradda
5 Is-maamul iyo khibrad isticmaale
Tani Xiaomi Mi 11 ayaa la yaab leh badanaa sababtoo ah gooladaha, annagu ma diidi doonno. Hadday Samsung faafinaysay geesyada dambe ee ay Huawei markii dambe sidoo kale tilmaamtay, hadda waa la caleemo saaray oo ay ku jiraan curvatures dhammaan cidhifyadiisa, laba aad uga badan dhinacyada, iyo laba kale oo aad uga sii yaraaday qaybta sare iyo hoose. Arrinka dhadhanka, in kasta oo aan shakhsiyan door bido shaashado siman, waa run in taabashada muuqaalku aad u wacan tahay, si toos ah ugu dhiganta caabbinta xarunta.
Cabirrada: 164.3 x 74.6 x 8.06
Miisaanka: Gram 169
Dhinaca dambe waxaa jira muraayad aad u qurux badan oo xoogaa qalooc ah, halkaas oo si la yaab leh oo weyn oo saddex-kameradood ah ay si cad ugu badan tahay. Uguyaraan cirifka birta ayaa ka caawiya sidii loo hayn lahaa terminaalka, kaas oo dabool la'aan runtii cabsi badan tahay. Taasi waa wax lala yaabo sababtoo ah fudeydkiisa, xoogaa garaam ah oo ka hooseeya qaar ka mid ah tartamayaasha tooska ah ee Samsung Galaxy S21 ama Huawei P40 Pro. Gacanta waxay dareemeysaa qiimo sare waana sida aan rabno inaan kuugu wareejino adiga. Haddii lagu qanciyey, waxaad had iyo jeer ku iibsan kartaa qiimaha ugu fiican ee Amazon.
Xiaomi kumuu dhaafi karin terminalkan, waana ay noqotay. Siideynta Qualcomm Sanpdragon 888 in ka badan awood la xaqiijiyay iyo waxqabad. Tan awgeed, waxaa la socon doona 8GB oo RAM ah nooca aan tijaabinay. Tani waxay na siisay natiijooyin - Geekbench ee 1.127 / 3.754, ka sarreeya Galaxy S21 Ultra iyo OnePlus 8 Pro.
Faahfaahinta farsamada Xiaomi Mi 11
Tusaale Waxaan nahay 11
Nidaamka hawlgalka Android 11 oo leh MIUI 12
Screen 6.81 "AMOLED leh QHD + / 120 Hz qaraarka iyo HDR10 +
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 888
Kaydinta gudaha 128 / 256GB
Kaamirada gadaal 108MP / 13MP Ultra Wide Angle 123º / 5MP Macro
Kaamirada hore 20MP oo leh fur f / 2.4
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.2 - USBC - WiFi 6 - 5G - GPS - NFC - Infrared
Tilmaamo kale Dareemida faraha-shaashadda - Ku hadla qalabka rikoodhada
Batariga 4.600 mAh oo leh 55W lacag deg deg ah iyo 50W Qi lacag - Dib ugu noqo ilaa 10W
Cabbirada 164.3 x 74.6 x 8.06
Peso Gram 169
Qiimaha 749 euros
Waxaan u maleynayaa inay si cad u muuqato in heerka awooda iyo waxqabadka aan u baahanahay gabi ahaanba waxba. Waa inaan xasuusnaano in 5G X60 modem uu si buuxda ugu dhexjiro processor-ka si loo badbaadiyo batteriga ugu badan ee suurtogalka ah iyo in lagu dhisay qaab dhismeedka 5nm. Waxqabadka wuxuu ku fiicnaaday imtixaanada, labadaba howlaha caadiga ah iyo dalbashada wax intaa ka badan waqtiga cayaaraha, haa, waxaa laga yaabaa inaan ogaanay heerkul xad dhaaf ah xaga dambe inta aan ciyaarayo, wax walwal ah ma leh.
Qeybta warbaahinta badan
Mount Xiaomi ku dheji Mi 11-gaaga guddi 6,81-inji AMOLED kaas oo ay kujirto qaraar 3200 x 1440 QHD +, oo guud ahaan loo yaqaan 2K. Gudigani wuxuu yeelan doonaa heer cabbitaan oo ah 120 Hz, haa, Xiaomi waxay cadeyneysaa inay noqon doonaan "la qabsi", sidaa darteed natiijadu way kaladuwantahay iyadoo kuxiran baahida qalabka, inkasta oo aan si daacad ah u dareemin kala duwanaanta isticmaalka maalinlaha ah. Waxay leedahay saamiga 20: 9 iyo cufnaanta pixels halkii inji oo ah 515. Gudida si fiican ayaa loo hagaajiyay, oo leh cadaan xoogaa qabow ah oo aan ku hagaajin karno dejinta iyo midabada aan si xad dhaaf ah u dhergin. Iftiinka otomaatigga ah wuxuu na siiyay dhibaato kale oo isku-habeyn madax-bannaan, laakiin Waxaan ku raaxeysaneynaa 1.500 nits taas oo ka dhigeysa mid banaanka ka muuqata oo ka duwan 5.000.000: 1 aad u fiican.
Isticmaalka hore: 91,4%
Daloolka shaashadda markan xoogaa bidix ayuu ku sii jirayaa, waa laga sii degdegi lahaa in ka badan, laakiin ma ahan wax laga xumaado. Dhanka dhawaaqa, waxaan haysanaa shahaado sitoroo ah, sikastaba, inkasta oo isku dayga, tayada ay xoogaa yartahay, in kastoo mugga ugu badan ee 83db ayaa ka badan intii ku filan. Tayada maqalka wali waa hawl sugeysa Xiaomi.
Sawirada tooska ah ee cabbirka caadiga ah waxaan ka helnaa difaac wanaagsan xaaladaha la filayo, inkasta oo qaabka otomaatigga ah mararka qaarkood uu ku dhaco farqiga xun. Waxaan ogaanay in midabada ay yihiin kuwo macquul ah isla markaana HDR otomaatig ah ayaa waxyaabo badan noo fududeyn doona. Habka Habeenku kiiskiisa wuxuu ku siiyaa natiijooyin wanaagsan sawirkana wuxuu ku yimaadaa qaab 108 MP ah wuxuu muujinayaa ilkihiisa, gaar ahaan markaan weynayno sawirka.
Xaglaha Ballaadhan Waxay aad uga hooseysay heerka kamaradda ugu weyn, gaar ahaan markaan hor dhigno farqiga u dhexeeya, adoo midabbada dheregsiinaya dhawaqana halkaas ka muuqda. Habeenki natiijadu waa sidii la filaayay, laakiin aad ayey ufiican tahay tixgelinta astaamaha.
Qaabka sawirka Wali waxay haysaa shaqo badan inay qabato, siyaado badan ee softiweerka iyo xaqiiqda ah inay leedahay dhibaatooyin culus marka la sawirayo waxyaabo aan dad aheyn waxay naga dhigeysaa wax kor u kaca, shaki la’aan qaabka ugu xun ee kuwa la falanqeeyay. Saas kuma ahan sawir qaadid qaab u dhow, halkaasoo aan ka helnay gaar ahaan natiijooyin wanaagsan, in kastoo halkaan aan inta badan u baahanahay iftiin badan.
Ugu dambeyntiina, kamaradda hore waxay bixisaa faahfaahin wanaagsan iyo kala-duwanaansho, in kasta oo la joojinayo "qaabka quruxda" xad-dhaafka ah wali waxay umuuqataa mid qasab ah. Way fiicantahay in la kiciyo qaabka HDR maadaama kamaradu ay dhibaato ka haysato laydhadhka, in kasta oo ay tani gaabinayso tallaalka.
Ugu dambeyntii, fiidiyowgu wuxuu u taagan yahay faahfaahintiisa wanaagsan iyo xasilloonida wanaagsan, si habsami leh oo dabiici ah u saxaya gariir, dhinacan ayaa naga yaabiyay, haa, had iyo jeer kamarad weyn. Sida iska cad habeenkii buuq iyo dhibaatooyin ayaa muuqda, laakiin wali si fiican ayey ula dagaalamaysaa laydhadhka waxayna ilaalineysaa faahfaahinta.
Is-maamul iyo khibrad isticmaale
120Hz wuxuu waxyar saameyn ku yeelanayaa ismaamulka, laakiin kan 4.600 mAh mabda 'ahaan sifiican ayey isu difaacaan. Waxay taageertaa lacag-bixinta degdegga ah ee 55W, 50W lacag-bixinta wireless-ka iyo 10W dib-u-soo-celinta gadaal ah. TFaa'iido ayaan leenahay in xeedhoku ku jiro hadiyad ahaanna waxaan u qaadannaa dabool (caadi). Qiyaastii maalin adeegsiga oo leh qaabeynta dhexdhexaadka ah, haa farqiga batteriga u dhexeeya 60Hz iyo 120Hz waa mid naxariis darro ah.
Lacagta buuxda waxay naga qaadan doontaa waxoogaa ka badan 1h, inkasta oo qiyaastii 25 daqiiqo aan ku guuleysanay inaan ka tagno 0% illaa 50%. Khibradayada guud ee terminalku way fiicnayd, in kasta oo baytarigu ka cabanayo astaamaha lagu soo daray oo tanina waxay uga tagaysaa hal tallaabo oo ka dambeysa dhamaadka sare ee arrintan. Haddii aad ka heshay, waxaad ka iibsan kartaa 749 noocyadeeda buluuga iyo madow ah ee Amazon.
Naqshadeynta iyo shaqeynta dareemaya Premium
Tilmaamo badan iyo shaashad wanaagsan
Batariga waxaa ku dhaca 120 Hz
Kaamirooyinka ayaa hal talaabo ka dambeeya qiimaha
Yimaado khatar ku dhow qiimaha dhamaadka-dhamaadka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Xiaomi Mi 11: Falanqaynta, sifooyinka iyo tijaabada kamaradda
Cubot KingKong 5 Pro waxaa lagu bilaabay 3 maalmood oo la soo bandhigay 44% waa .121,62 XNUMX
8-da kulan ee ugu fiican dharka labiska ee Android